landcampaigninmyanmar | Love Ye Habitat; Help Farmers who make food for you all! | Page 2
Thingangyun Township, Peace Forum 15.Aug.2015
Share Mercy Peace Forum Feedback Report 8-23-2015SHARE MERCY
No. 10, 2nd Floor, 53rdStreet, 2nd Ward, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar
Tel: (95) 09-7955-43906, (95) 09-420-119-420, (95), (95) 09-3387-6343, Email: sharemercy@gmail.com, www.sharemercy.net
Peace Forum Attendees’ Feedback and Profiles
Background of the Peace Forum Report
Share Mercy and Quoranic Knowledge Enlightening organized the “Peace Forum” with the support provided by “DKA”. All the activities were facilitated by Byanmaso (CSO), Dagon (CSO) and Oakkan (CSO) in general for six months pilot project. As per the work plan all partners involved in this occasion designed and facilited to hold the “Peace Forum” in those three townships. Among them “Byanmaso” first organized the “Peace Forum” which was jointly supported by all four partners.
Among the forum attendees there were (40) males, Female (8) and other (6), its total numbers are (54) which is total (30) percent of the total attendance. They gave feedback on the forum they participated. It was organized from (9:30) am to (5:00) PM. There were altogether (158) participants from all four major faith groups located in the project areas; Thingangyun Township, Tarmwe Township and Oakkan Township, Yangon Division.
Majority of the participants were Male, while around 13 percent were “Female”. Significantly, we found “10”percent of the participants as “Third Gender.”
Representation of the Total Participants on Peace Forum held on 15-Aug-2015
Majority of the Workshop attendees were from CSOs and the
One third of the participants agreed that Forum Design is very good, while almost “20” percent of the attendees commented that it is very good. On the other hand, around “10” percent said it is fair enough. Exceptionally, one participant did not sayaward at all.
Welcoming / Hosting, Arranging Seating Planning
In average, people said it is good with regarding “Welcoming, Hosting, and Arrangement on Seat Planning for all the participants. In average, all attendees expressed that they are good in general.
Meal and Refreshment
In average, people said meal provided was good.
Like about food on the day of the Forum
Discussions and arrangement of Plenary Session with Religious Leaders
SM and Q Education together with Byanmaso, organized the plenary sessions where SA and MCDA also supported. Locals nominated the religious leaders and they were invited on the very day of Peace Forum. All four leader of major religions attended the Forum as well as participating throughout the forum day. The plenary sessions was moderated by “Islamist Religious Leader” U San Aung from Quoranic Knowledge Enlightening. Feedbacks of the participants are shown in the line graph.
Feedback on “Brain Storming Sessions”
There were altogether four topics under brainstorming sessions. Name of the topics are loving-kindness Vs Human Rights, Loving-Kindness Vs Social Media, Opportunities and Challenges in Building Interfaith Peace”, Loving-Kindness and My Atmosphere”. Approximately, there were around “15” discussants in each brainstorming session out of total participants of the Peace Forum “158”. Majority of the participants felt that small groups’ discussions were good, while one third of the respondents stated that it was very good. Few participants rated brainstorming sessions as “Fair”.
Loving-kindness Vs Human Rights
Not to be selfish, angry, greedy, when doing in best interest of the people
Basic value of the loving-kindness is being patient, liking and appreciating in all religious teachings
Loving-kindness cannot be differentiable
Loving-kindness can keep fear away and those with loving-kindness can benefit the community
Loving kindness can be faded-away if people could no longer be bearing, full of anger, greedy, uncertainty, those with loving-kindness can feel peaceful, it will also effect on the atmosphere
Loving-Kindness always has its reflection, never discriminate, loving kindness can’t be expressible in words, people with loving-kindness may assist who are in need and such assistance is bondless
Wearing Style has one’s decision, human rights but one’s own act must be negatively affect on the others
To understand one’s religions and create opportunities to exchange interfaith knowledge among the different faith groups and improve the practice of peaceful co-existing and cooperation
Loving-Kindness includes ethics, justice, stability, sympathy
Loving-kindness is light for all; it is being patient, unity, forgiving, not blaming, do not expecting to have return, everyone wishes to have Loving-Kindness
Peace is what society needs the most; loving-kindness related to all
Man has same value regardless of the other status and entitled to same rights
Loving-Kindness Vs Social Media
To spread Loving-Kindness, the role of media is vital
We can be updated thanks to media
Can do education by using media
Media help but also hinder
Media is sometime not reliable
Media can make people to be delicate and change people’s attitudes
Those who are posting should post news beneficial to the citizens
Media should be ethical and show the source of information
You, post the correct and reliable news
Love not only your relatives but also the other, love all human being
Right thinking and right doing
One click can happen anything
Be mindful when dealing with social media
Be mindful with photos used in the post
Loving Kindness and My Atmosphere
To spread Loving-Kindness, it needs atmosphere
Loving-kindness can make the blind see
Loving-Kindness depends upon the ethics and characters
Loving-Kindness is key to success
Losing confidence can affect Loving-Kindness
Origin of loving-kindness is depending on the “Children Lives Expereinces”
Opportunities and Challenges in Building Interfaith Peace
Stakeholders more interest How to reduce “Misunderstanding, and Violence”?
Increased Unity (Community of different Faiths become united upon the occurrence of Flood in the whole Myanmar) Reduce extremism and change attitude and behaviors and mind-sets
observe “Sharing” for flood victims by all religious and race groups
Practice Religions in reality for Flood Survivors Avoid Hate Speeches and make people to be “Peaceful”
Knowledge amplified for peaceful co-existence Rule and Law and Enforcement
Realize idea of justice defined by all religions To have Freedom, Fair, Rule and Law and Enforcement
More humane To have attitudes to help all the needy one regardless of race, religion and color
Forums and Discussions on Interfaith Peace Transparency in political, economical
Experienced Human Resources in Interfaith Peace, Knowledge and Friendly Cooperation Favorable Policy from the Government for Interfaith Peace
Political Knowledge gained because of Conflicts To be all inclusive
To be able to debate on the “Diversity”
To educate the citizens, and more idiomatic
Improve Cooperations in religious events and caring of the items related to faith (Buddha Image/ Mosques/ Monastery/ Church)
Participants assumed that Interfaith Peace could bring about “Development of the country when it is due”.
We need to continue the Interfaith Peace activities so that we shall reach to Peaceful State
Gain knowledge about Interfaith Peace and Understanding among different faith groups
Make “Microphone and speaker to be better” for the next time
Wish to hold Interfaith Peace Forum at the central level and at every state
Very good to have Peace Forum
Need to do it again; to promote interfaith peace
We should have gender equality in the forum attendance
Gain friends, Human Rights, Equal Right, Gain Peaceful Lives
Aug. 2015 Meetings’ Decisions before the “Peace Forum done on 15.Aug.2015”
Tasks SM QE BMS SA
Formation of Leading Committee for Peace Forum on 9.Aug.2015 at Byanmaso Office Could form
1. U Wayan T.M.Win
2. Daw Ni Ni Than 1. U San Aung
2. U Khin Maung 1. U Aung Moe
2. Daw Nyo Nyo Than (Excused for Flood Response)
Formation of Financial Committee at Byanmaso Office 1. Daw Thinzar Myo Kyaw 1. U Thant Zin Oo 1. Daw Nyo Nyo Than –
Assigning Facilitators 1.U Thihathu
2.U Kyaw Myo Thant
3.U Than Lwin
4.Daw Hla Hla Swe (4)Facilitators from SA will be co-facilitating the brainstorming Sessions
Video Shooting Will assign one for shooting from starting to ending of the Peace Forum · Will assign one for shooting from starting to ending
and will combine video clicks and edit and gave original and master file to SM
· Edition expenses will be 50000 Kyat
Actual After Conducting “Peace Forum 15.Aug.2015”
Tasks SM QE BMS SO
Tel: (95) 09-7955-43906, (95) 09-420-119-420, (95), (95) 09-3387-6343, Email: sharemercy@gmail.com, http://www.sharemercy.net
• Not to be selfish, angry, greedy, when doing in best interest of the people
• Basic value of the loving-kindness is being patient, liking and appreciating in all religious teachings
• Loving-kindness cannot be differentiable
• Loving-kindness can keep fear away and those with loving-kindness can benefit the community
• Loving kindness can be faded-away if people could no longer be bearing, full of anger, greedy, uncertainty, those with loving-kindness can feel peaceful, it will also effect on the atmosphere
• Loving-Kindness always has its reflection, never discriminate, loving kindness can’t be expressible in words, people with loving-kindness may assist who are in need and such assistance is bondless
• Wearing Style has one’s decision, human rights but one’s own act must be negatively affect on the others
• To understand one’s religions and create opportunities to exchange interfaith knowledge among the different faith groups and improve the practice of peaceful co-existing and cooperation
• Loving-Kindness includes ethics, justice, stability, sympathy
• Loving-kindness is light for all; it is being patient, unity, forgiving, not blaming, do not expecting to have return, everyone wishes to have Loving-Kindness
• Peace is what society needs the most; loving-kindness related to all
• Man has same value regardless of the other status and entitled to same rights
• To spread Loving-Kindness, the role of media is vital
• We can be updated thanks to media
• Can do education by using media
• Media help but also hinder
• Media is sometime not reliable
• Media can make people to be delicate and change people’s attitudes
• Those who are posting should post news beneficial to the citizens
• Media should be ethical and show the source of information
• You, post the correct and reliable news
• Love not only your relatives but also the other, love all human being
• Right thinking and right doing
• One click can happen anything
• Be mindful when dealing with social media
• Be mindful with photos used in the post
• To spread Loving-Kindness, it needs atmosphere
• Loving-kindness can make the blind see
• Loving-Kindness depends upon the ethics and characters
• Loving-Kindness is key to success
• Losing confidence can affect Loving-Kindness
• Origin of loving-kindness is depending on the “Children Lives Expereinces”
• Participants assumed that Interfaith Peace could bring about “Development of the country when it is due”.
• We need to continue the Interfaith Peace activities so that we shall reach to Peaceful State
• Gain knowledge about Interfaith Peace and Understanding among different faith groups
• Make “Microphone and speaker to be better” for the next time
• Wish to hold Interfaith Peace Forum at the central level and at every state
• Very good to have Peace Forum
• Need to do it again; to promote interfaith peace
• We should have gender equality in the forum attendance
• Should include all
• Gain friends, Human Rights, Equal Right, Gain Peaceful Lives
9. Aug. 2015 Meetings’ Decisions before the “Peace Forum done on 15.Aug.2015”
Formation of Leading Committee for Peace Forum on 9.Aug.2015 at Byanmaso Office
2. Daw Ni Ni Than
1. U San Aung
Video Shooting Will assign one for shooting from starting to ending of the Peace Forum
• Will assign one for shooting from starting to ending
• Edition expenses will be 50000 Kyat
On The Land We Live (English language) Informative documentary by Land Core Group Myanmar about the challenges faced by poor farmers from land grabbing and land dispossession…
Formation of Peasants Union (Central) _ Chaired by Su Su Ngwe
22 March 2015 22:01(+0630) (လွန်ခဲ့သော2နာရီ ခန့်က)
မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူ လယ်သမား သမဂ္ဂ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းခြင်း အခမ်းအနား (ဓာတ်ပုံ- တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂ fb/မတ် ၂၂၊ ၂၀၁၅)
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အဓမ္မလယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံရမှု၊ တောင်သူလယ်သမားတွေ တရားစွဲဆို ခံနေရမှုစတဲ့ ချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ လယ်သမား အခွင့်အရေးတွေကို တောင်းဆို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အတွက် တောင်သူလယ်သမားထုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ တောင်သူ လယ်သမား သမဂ္ဂအဖွဲ့ အမြန်ဆုံး ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ လွှတ်တော် တောင်သူ လယ်သမားရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူက တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာပဲ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းအသီးသီးမှာ လယ်သမား သမဂ္ဂ အဖွဲ့တွေ ပေါင်းစည်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူ လယ်သမား သမဂ္ဂ (ဗဟို)ကို တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ အညီ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ဖို့အတွက် သမဂ္ဂဗဟိုကို တရားဝင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ မဆုမွန် စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ နိမ့်ကျနေဆဲ လူမှုဘဝတွေကို မြှင့်တင်နိုင်ဖို့၊ လယ်သမားအကျိုးစီးပွား ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့နဲ့ တောင်သူလယ်သမားတွေ ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်တွေကို ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုနိုင်ဖို့ တောင်သူလယ်သမားထုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အဖွဲ့ တရားဝင် ရှိဖို့က သိပ်-အရေးကြီးတယ်လို့ လွှတ်တော်တွင်း မြေယာသိမ်းဆည်းခံရမှုတွေကို ဖော်ထုတ်ပေးနေတဲ့ ကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူလည်းဖြစ်၊ တောင်သူလယ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်တဲ့ ဦးဖေသန်းက ပြောဆိုပါတယ်။
“တနိုင်ငံလုံး လယ်သမားသမဂ္ဂ၊ ပြည်နယ်အလိုက်၊ တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် တနိုင်ငံလုံး လယ်သမားသမဂ္ဂကို ကျနော်တို့ ဖွဲ့ဖို့က တော်တော့်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လယ်သမားဆိုတာ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ၇၀ % ခန့်ရှိတယ်။ လယ်သမားတွေက တစုတစည်းတည်း စုစည်းပြီးတော့ သမဂ္ဂလိုဟာမျိုး၊ အဖွဲ့အစည်းတခု ထူထောင်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့သမဂ္ဂရဲ့နောက်မှာ၊ အဲ့ဒီ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့နောက်မှာ လယ်သမားတွေအားလုံးကို စုပေါင်းမိပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်၊ အဲ့ဒီလယ်သမားကို ပမာမခန့်လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ ခုနကလို လယ်သမားရဲ့အားကို လယ်သမားက ရယူတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် တနိုင်ငံလုံးရှိတဲ့ လယ်သမားတွေဟာ တခုတည်းသော အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရကို ဖိအားပေးဖို့လိုပါတယ်။”
ဒါ့အပြင် လယ်သမားတွေအနေနဲ့ မြေယာဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ လယ်သမားအခွင့်အရေးတွေကို နားလည်သိရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း ဦးဖေသန်းက ပြောပါတယ်။
“အားနည်းချက် ဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်တော့ လယ်သမားတွေလက်ထဲမှာ အထောက်အထားတွေ မရှိတာပဲ။ လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာ ဒါမှမဟုတ် မြေသိမ်းတဲ့ သူတွေကျတော့ လက်ထဲမှာ အထောက်အထားတွေ သူတို့မှာ ရှိကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ လက်ငုတ်ထက် မူလလက်ငုတ်ကို ကျနော်တို့ ကော်မရှင်အနေနဲ့ကတော့ ပိုပြီးတော့ ဂရုစိုက်ပါတယ်။”
လယ်သမားတွေဟာအဓမ္မ လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းခံရမှုတွေကို ကြုံနေယုံတင်မကဘဲ မြေယာသိမ်းခံရတဲ့ လယ်သမားတွေက သူတို့လယ်ယာမြေထဲ ပြန်ဝင်ပြီး ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးတဲ့အခါ ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု၊ ဝတ္တရားနှောင့်ယှက်မှု စတဲ့ တရားစွဲဆိုမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လယ်သမားအရေး လှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေးက တောင်သူလယ်သမားတွေ လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲပြဿနာတွေကို ရှင်းပြပါတယ်။
“လောလောဆယ်ပေါ့နော်။ သူတို့မြို့နယ် အသီးသီးမှာ အဓိက ၄၄၇၊ ၄၂၇ ပုဒ်မတွေနဲ့ တရားစွဲထားတာရှိတယ်။ လယ်ယာမြေတွေကို သိမ်းထားတာကို တရားမျှတစွာနဲ့ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေ မရှိသေးတာတွေရှိတယ်။ အခု လယ်သမားတွေ စိုက်ပျိုးရေး စားရိတ်တွေကို ချေးတဲ့အခါမှာလည်း မိုးတွင်း ချေး၊ နွေပြန်ဆပ်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ နှစ်စဉ်စီမံကိန်းနဲ့ ချေးဖို့အတွက် နောက်ပြီးတော့ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းတွေကို အစိုးရက အရစ်ကျပေးတယ် ဆိုပေမယ့် လယ်သမားစစ်စစ်တွေလက်ထဲ မရောက်ဘဲနဲ့ မြို့နယ် ထွေအုပ်တွေနဲ့ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ အကြောင်းပေါင်းသင့်တဲ့ တကယ့်ကို ပိုက်ဆံရှိတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေလက်ထဲကိုပဲ ရောက်သွားတယ်။ နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ ဒီစက်တွေကို လယ်သမားစစ်စစ်တွေ လက်ထဲရောက်အောင် ပေါ့နော် အစိုးရအနေနဲ့ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ဖို့ရယ်၊ ဦးစီးဌာနတွေရဲ့ တာဝန်မဲ့မှုတွေကြောင့် တောင်းဆိုနေရသလိုဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီ့ဥစ္စာတွေက အများဆုံး အခက်အခဲ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ ပေါ်ပေါက်နေတယ်။”
အခုလို လယ်သမားတွေ ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ မပြေလည်မှုတွေကို အစိုးရဌာနတွေအပြင် လွှတ်တော်နဲ့ပါ တရားဝင် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အရေး ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအသီးသီးမှာ တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေ ပေါင်းစည်းပြီး သမဂ္ဂဗဟိုကို မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မှာ တရားဝင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြ ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂ (ဗဟို)ကို တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ အညီ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂ (ဗဟို) ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူလိုက်တဲ့ မစုစုနွေးက ပြောပါတယ်။
“ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ နေပြည်တော်ကို အမတို့ ဖွဲ့စည်းပုံ မူကြမ်းတွေ၊ တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂရဲ့ Logo (အမှတ်တံဆိပ်) ဘယ်လိုထားလဲ။ ဘာအရောင်တွေက ဘာကြောင့်ရွေးတယ်။ နောက် အလံပေါ့။ အလံက ဘာကိုကိုယ်စားပြုထားတယ်-ဆိုတာမျိုး လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့နော်။ အခန်း (၈) ခန်း အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်းကို ဆွဲတယ်။ မူကြမ်းကို ဆွဲပြီးတော့ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှာ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကတက်လာတဲ့ တောင်သူလယ်သမား သမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်းကို ဘယ်ဟာတွေပြင်သင့်တယ်။ ဘယ်ဟာတွေကို ကြိုက်တယ် ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေး တယ်။ ဆွေးနွေးပြီးတော့ လယ်သမားတွေရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကို ပြင်ဆင်တယ်။ ပြင်ဆင်ပြီးတော့ အားလုံးပေါ့။ ဖွဲ့စည်းပုံ မူကြမ်းကို အတည်ပြုလိုက်တယ်။ ဒီနေ့မနက် မတ်လ ၂၂ ရက် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် (၃၂) ယောက်ကို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်တယ်။”
တောင်သူလယ်သမား အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်ရေးနှင့် မြှင့်တင်ရေးဥပဒေကို သမ္မတ လက်မှတ်ရေးထိုးပြဌာန်းပြီးဖြစ်ပေမဲ့ ထည့်သွင်းရန် ကျန်နေသေးတဲ့ နည်းဥပဒေတွေထဲမှာ တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးအတွက် အဓိကလိုအပ်တဲ့ စိုက်ပျိုးချေးငွေ၊ ရင်းနှီးမတည်မှုတွေအပြင် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါမှာ လယ်သမားတွေရင်ဆိုင်ရမယ့် အခက်အခဲတွေ ပြေလည်နိုင်ဖို့အပါအဝင် တရားရင်ဆိုင်နေရဆဲ တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်ပါ အမှန်တကယ် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်နိုင်ဖို့အရေး တောင်သူလယ်သမားတွေဘက်က တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Letpadaung Mine Update – Documentary of DVB
The Latpadaung Mine Story.
Nay Myo Zin and Naw Ohn Hla Arrested on Demonstration towards Wanbao (referred to DVB)
By NAW NOREEN 30 December 2014 Print Email
Happy New Year? Evicted from their homes the previous night, local residents sit around listlessly, wondering what to do on 1 January 2015. (PHOTO: DVB)
200 ‘squatters’ evicted from Rangoon suburb
Rangoon stunned by flag prank
Dala 200 Squatters Destroyed (referred from DVB)
By NANG MYA NADI2January 2015 Print Email
Some 200 residents of the Rangoon satellite town of Dala were evicted on New Year’s Eve from the homes they had lived in for more than 30 years.
A combined force of around 40 police officers, fire department workers and municipal officers were on hand on the evening of 31 December to ensure that the so-called “squatters’ were moved along without incident and that their makeshift homes – mostly wooden huts – were destroyed.
According toafemale resident of the affected barrio in Tadachaung village, the 200 evictees were left with nowhere to go.
“I was born here and have been living here for over 30 years,” she told DVB by phone on 1 January.
“On Wednesday evening, our home was destroyed. The authorities said we are not allowed to stay here any longer. In total over 100 houses – mostly huts – were destroyed and around 200 people were left homeless,” she said.
On 1 January, some of the evicted residents were seen rebuilding their houses on the same site; others were camping out inanearby field.
“If we don’t rebuild them today, we’ll have no place to sleep tonight,” the woman said.
A flag representing the State of Burma (1943-45) was hoisted on top of the High Court in Rangoon on New Year’s Day 2015 by person or persons unknown. (PHOTO: DVB)
Low turnout mars Rangoon municipal elections
“Being manual labourers, we do not have the money to move elsewhere. Our only option is to rebuild our homes where they stood. We know the authorities will come back to destroy them again, but we have no other choice.”
A police officer in Pyawbwegyi village-tract, which falls under the same local jurisdiction as Tadachaung, said the decision to evict the residents came from the local administration and municipal department.
“It didn’t have anything to do with the police,” he said. “This wasadecision by the local administrators and municipal officials. To the best of my knowledge, the land in question is owned by the Housing Department. So far, we have not been informed as to how or where the squatters will be resettled.”
Dala township administrators and municipal department officers were unavailable for comment.
Let Pa Daung Update 24-Dec-14
လက်ပံတောင်းတောင် အဓိကရုဏ်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးကြပြီး အဓိကရုဏ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေပြီလို့ ၀န်ကြီးချုပ်က ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားပြုသွာေးရာက်ဆွေးနွေးတဲ့ အဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်ကို မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဒေါက်တာမြင့်နိုင်တို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သွားတွေ့ကြတာ ဘာတွေ ပြောဆိုဆွေးနွေးကြလဲခင်ဗျ။
“ဟုတ်ကဲ့ နေ့ခင်း ၂ နာရီ သုံးနာရီမတ်တင်းလောက်က တွေ့ပါတယ်။ အခု ၂၂ ရက်နေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ မိုးကြိုးပြင်အလယ်ရွာက ဒေါ်ခင်ဝင်းသေသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးသာအေးနဲ့ သွားတွေ့တာပါ။
“ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ဒီ ခြံစည်းရိုးခတ်နေတဲ့ကိစ္စက ဆက်ခတ်ဦးမလား၊ ဆက်ခတ်ရင် ပြဿ နာတွေ အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူက ခြံစည်းရိုးခတ်တာ ပြီးသွားပါပြီတဲ့ ဆက်ခတ်စရာမလိုတော့ပါဘူးတဲ့။ နောက်တခါ ဆည်ရွာမှာ ရဲမှူးကြီးက မီးရှို့မယ်ဆိုပြီး ကြိမ်းသွားတာ ဟုတ်ပါသလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ နောက် အခုကိစ္စမှာ ဘယ်သူက တာဝန်ရှိပြီး ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမှာလဲလို့ မေးတော့ သူတို့ ကော်မရှင်ဖွဲ့ထားပါတယ်တဲ့။ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်သူအောင်၊ ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိနဲ့ ဒုရဲမှူးကြီးတဦး အဲဒီသုံးဦးနဲ့ သူတို့ ကော်မရှင်ဖွဲ့ထားပါတယ်တဲ့။ ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ အဲဒီကော်မရှင် အစီရင်ခံစာထွက်လာပြီးမှ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပါ့မယ်တဲ့။ နှစ်ပတ်အတွင်း ဖြေရှင်းပါ့မယ်တဲ့။
“ကျနော်က ပြောတယ် ရဲတွေက ဒီလိုဖြေရှင်းနည်းဟာ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ လုံးဝလက်သင့်မခံပါဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်လေ။ အဲဒီကျတော့ သူတို့ နောက်နောင် ဒါလိုမျိုးမဖြစ်အောင် သူတို့လုပ်ဆောင်ဖို့၊ လယ်ယာမြေ မြေကိတ်စတွေအားလုံးကို လျော်ကြေးပေးနိုင်ရင် ထပ်ပေးဖို့၊ အားလုံးညှိနှိုင်းဖို့ ကျနော်တို့ ပြောခဲ့ကြတာပါ။”
ခြံစည်းရိုးခတ်တဲ့လုပ်ငန်းက ပြီးသွားပြီပေါ့ ဟုတ်လား။
“ဒီအပတ်တော့ ပြီးသွားပြီတဲ့ ။ နောက်တခါတော့ မသိဘူးတဲ့။ အဲဒီကိစ္စအတွက် အ ခုပါသွားတဲ့ လယ်ယာမြေတွေကိစ္စအတွက် တနှစ်စာ သီးနှံလျော်ကြေးပေးမယ်တဲ့၊ နောက် အရင်က မြေယာလျော်ကြေးပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ မည်သူမဆို အချိန်မရွေးလာထုတ်လို့ရပါတယ်တဲ့။ လျော်ကြေးလည်း တိုးပေးထားပါတယ်လို့ ပြောတယ်ဗျ။”
အသက်သေဆုံးမှုတွ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သူတွေအတွက် နစ်နာကြေး ပေးရေးကိစ္စရော။
“ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးတဲ့ ဒေါ်ခင်ဝင်းကိတ်စကိုတော့ သူတို့ ကြားကနေ ၀င်နေပါတယ်။ အခုနေ ၀င်သွားရင် တမျိုးဖြစ်မှာစိုးလို့။ သူတို့တော့ လျော်ကြေးပေးဖို့တော့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒဏ်ရာရသူတွေ ဆေးရုံတက်သူတွေအတွက်လည်း သူတို့ပြောပါတယ်။”
ဒေသခံတွေရဲ့ အမျက်ဒေါသ ပြေလျော့အောင် ၀န်ကြီးချုပ်ဦးသာအေးက ဘာတွေထပ်ပြောလိုက်သေးလဲခင်ဗျ။
“အဲဒါ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် (တွေ့ဆုံပွဲမှာပါတဲ့ ပုလဲမြို့နယ်အမတ်) နဲ့ညှိပြီးတော့ နောက်နောင် သူတို့ဆက်လုပ်မယ့်ဟာတွေကို ဒေသခံတောင်သူနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ သပ်သပ် ဖြေရှင်းအောင်လုပ်ပါ့မယ်တဲ့။ သူတို့ပြောတာ ခြောက်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း လက်သင့်ခံထားတဲ့အတွက် ဆက်လုပ်ရတာပါလို့ ပြောတယ်ဗျ။ သူတို့ တတ်နိုင်သမျှညှိပါ။ ဒီလိုမျိုးပြဿ နာမဖြစ်အောင်လုပ်ပါ၊ တိုင်းအနေနဲ့လည်း ဒီကိစ္စကို လက်သင့်မခံဘူးဆိုတာ ကြေညာချက်တစောင် (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်) ထွက်ပါတယ်။”
“အင်း၊ ဒါ သူတို့ပြောတဲ့ကိစ္စကို စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပေါ့ဗျာ။ သူတို့အပြောနဲ့ အလုပ်နဲ့ ညီမညီ။ နှစ်ပတ်အတွင်း စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့ ဘယ်လို လုပ်မလဲဆိုတာ ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပေါ့။ နှစ်ပတ်အတွင်းလုပ်မယ်လို့တော့ ပြောတာပဲ။”
(မှတ်ချက်။ ။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်မှာ အာဏာပိုင်နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ပဋိပက္ခတွေမှာ လက်နက်နဲ့ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုတွေကို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပြီး အဓိကရုဏ်းဖြစ်စဉ်ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့နဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာပါအချက်တွေကို လေးစာလိုက်နာ အကောင်အထည်ဖော်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။)
ကို tun wai မှ ကူးယူတင်ပြသည်။
Let Pa Daung Copper Mine Update 24-Dec-2014
လက်ပံတောင်းနယ်မြေအတွင်း ခြံစည်းရိုးတိုးချဲ့ခတ်ခြင်းကို ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက တရုတ်နိုင်ငံသားများဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကာ ဟန့်တားသူဒေသခံများကို မြန်မာဝမ်ပေါင်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖြိုခွင်းရာ ဒေသခံနှစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
လက်ပံတောင်းနယ်မြေအတွင်း ခြံစည်းရိုးတိုးချဲ့ ခတ်ခြင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက တရုတ်နိုင်ငံသားများဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကာ ဟန့်တားသူ ဒေသခံများကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး တရုတ်ဝန်ထမ်းများကလည်း အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်က လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအား သတ္ထုတူးဖော်ခွင့် ရရှိထားသည့် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ၏ စီမံကိန်းနယ်မြေအဖြစ် ခြံစည်းရိုးများ တိုးချဲ့ခတ်နေမှုအပေါ် ဒေသခံများက ဟန့်တားရာမှ နှစ်ဖက်ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မိုးကြိုးပြင် အလယ်ရွာမှ အသက် ၅၀ ကျော်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်လည်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ခြံစည်းရိုး တိုးချဲ့ခတ်ခြင်းများအား ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် နံနက်အစောပိုင်းမှ စတင်ကာ ဆည်တည်း၊ တုံ၊ ရွှေလှေ အစရှိသည့် ကျေးရွာများအနီးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဆည်တည်းရွာ အနောက်ဖက်တစ်လျောက်နှင့် ရွာမြောက်ဘက်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် နံနက် ၆ နာရီမှစတင်၍ ခြံစည်းရိုးခတ်ရာ၌ ရွာသားများတားဆီးကြရာ လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရာဘာကျည်နှင့် ပစ်ခတ် လူစုခွဲခြင်းကြောင့် ရွာသားသုံးဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ခြံစည်းရိုး တိုးချဲ့ခတ်ရာတွင် ဒေသခံများနှင့် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မွန်းလွဲ ၃ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် တုံကျေးရွာအနီး၌ ဒေသခံများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား နှစ်ဖက်ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံမှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း ရွှေညဝါဆရာတော် အပါအဝင် ဆရာတော်အချို့မှ တားဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားမှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ခြံစည်းရိုး တိုးချဲ့ခတ်မှုအား ညနေပိုင်းအချိန်ထိ လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ဝ ဝန်းကျင်ခန့်နှင့်အတူ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းအနီးရှိ ဇီးတောရွာ စန်းမြ၀တီကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးအာလောကမှ “လူတွေ မျက်နှာမသစ်ရသေးခင် အချိန်မှာ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီနဲ့ ရဲလုံခြုံရေးတွေ ရောက်လာပြီး ရွာသားတွေရဲ့ ရိတ်သိမ်းခါနီး အသီးအပင်တွေကို ဘူဒိုဇာတွေနဲ့ အတင်းထိုးဖျက်ပြီး ခြံစည်းရိုး အတင်းခတ်တယ်။ တားဆီးဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ရွာသားတွေကို ရဲတွေက သေနတ်နဲ့ ပစ်တားတယ်၊ ရွာသားတွေက ဘာလက်နက်မှ မပါဘူး၊ အနားကပ်လို့ မရအောင် အချက်ပေါင်းများစွာ ပစ်တယ်။ ရာဘာကျည်ဆံ မျက်နှာမှန်သူတစ်ယောက် အပါအ၀င် သုံးယောက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတယ်။ အရင်ရက်က တရုတ်အလုပ်သမားတွေနဲ့ ရွာက အမျိုးသမီးတွေ လုံးထွေးသတ်ပုတ်တဲ့အထိ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ခဲ့တာ တရုတ်တွေကိုင်တဲ့တူနဲ့ အထုခံရလို့ မိန်းကလေးနှစ်ဦးမှာ တစ်ဦးက အသက်ရှုရခက်ခဲပြီး နောက်တစ်ဦးက လမ်းကောင်းကောင်း မလျှောက်နိုင်ဘူးဟု မိန့်ကြားသည်။
ဆည်တည်းရွာ၏ အနောက်ဖက် မိုးကြိုးပြင်ရွာ ထွက်လမ်းနှင့် ရွာအရှေ့ဖက် တုံရွာသို့ အထွက်လမ်းကို သံဇကာဖြင့် ခြံစည်းရိုးခတ်ရာတွင် စက်ကြီးများ၊ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်နှင့် တရုတ်အလုပ်သမား များစွာကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ရွာဝင်ပေါက်လမ်းများကို ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့် ရွာတောင်ဖက်ရှိ ဇီးတော၊ ကျောက်ဖြူတိုင်ရွာဖက်မှသာ ဆည်တည်းရွာသို့ ၀င်ထွက်နိုင်တော့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
လက်ရှိ ခြံစည်းရိုး တိုးချဲ့ခတ်နေသည့် မြေနေရာများမှာ ဒေသခံ တောင်သူများအနေဖြင့် မြေယာနှင့် သီးနှံလျော်ကြေးများအား တစ်စုံတစ်ရာ ရယူထားခြင်း မရှိသေးသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ဒေသခံများဘက်မှ တားဆီးနေခြင်းဖြစ်ပြီး ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ကုမ္ပဏီဘက်မှ လက်ခံခြင်းမရှိဘဲ စိုက်ပျိုးထားသည့် သီးနှံခင်းများအတွင်း ဇွတ်အတင်း ဝင်ရောက်ကာ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဒေသခံတောင်သူများက ပြောကြားသည်။ ယင်းသို့ ခြံစည်းရိုး တိုးချဲ့ခတ်ထားရာတွင် ဒေသခံတောင်သူများ စိုက်ပျိုးထားသည့် သီးနှံခင်းများအတွင်းမှ ဖြတ်သန်းပြုလုပ်ခြင်း သီးနှံခင်းများအား စက်ယန္တယားများဖြင့် ထိုးချေဖျက်ဆီး၍ ခြံစည်းရိုး တိုးချဲ့ခတ်ခြင်း ယာခင်းများအား အတင်းအဓမ္မ သိမ်းယူလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
“မနက် ၁၁ နာရီလောက်မှာ ရွာအရှေ့ထိပ်ကို ပိတ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက် ရွာအ၀င်အထွက်ကို ကျောက်ဖြူ တိုင်ဘက်ကသာ သွားနိုင်တော့မယ်။ ရဲတွေသာကမဘူး ၀မ်ပေါင်လုံခြုံရေးတွေကပါ နံပါတ်တုတ်တွေ သုံးတယ်။ ရွာသားတွေတင် မကဘူး ဦးဇင်းကိုပါ လိုက်ရိုက်လို့ လွတ်အောင်ရှောင်ပြီး လေးဘက်ကုန်း ထွက်ပြေးရတယ်” ဟု ဦးဇင်းစန္ဒာသီရိက မိန့်ကြားသည်။
ဒေသခံ တောင်သူများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား နှစ်ဖက်ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ဆည်တည်းကျေးရွာမှ ဒေသခံများမှ ကျေးရွာအတွင်း မနေထိုင်ရဲသောကြောင့် နီးစပ်ရာ ဆွေမျိုးများထံသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမှုများ ရှိနေကြောင်း ဒေသခံများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ ယင်းအပြင် ကျေးရွာအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးမည်ဟု သက်ဆိုင်ရာမှ ပြောဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဒေသခံများမှ ကြောက်လန့်၍ နီးစပ်ရာ ဆွေမျိုးများထံသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရကြောင်း ဒေသခံများ၏ ပြောဆိုချက်များအရ သိရသည်။
“ကျွန်မတို့ ဆည်တည်းရွာကို တရုတ်တွေက မမြင်ချင်ဘူး။ လုံခြုံရေးတွေက မီးနဲ့ရှို့မယ် သတင်းရလို့ ညကလည်း တစ်ညလုံး မအိပ်ရဘူး။ ရွာမှာ သီးနှံတင်း (၁၀၀)(၂၀၀)ထွက်တဲ့သူတွေ ရှိတော့ မီးရှို့ခံရရင်တောင် စားစရာကျန်အောင် မနေ့ကတည်းက အသီးအနှံတွေကို ပွဲရုံပို့သူပို့၊ နီးစပ်ရာရွာတွေဆီ ပို့သူ ပို့ကြရတယ်။ ရွာမှာ ဂျပန်ခေတ် ပြန်ရောက်သလို ဖြစ်နေတယ်။ ဂျပန်မကြောက်ရ ကိုယ့်လူမျိုးကို ပြန်ကြောက်နေရတယ်။ လက်နက်အားကိုးနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ လယ်ယာမြေတွေကို ဓါးပြတိုက်ယူနေတယ်။ ရွာသားတွေက နည်းနည်းလေးရှိတာ။ အကူအညီပေးမဲ့သူ မရှိဘူး။ ရဲတွေ တရုတ်တွေက အလုံးအရင်းနဲ့ သိမ်းခါနီး သီးနှံတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်တယ်။ ပါးစပ်ပေါက် ရောက်ခါနီးမှ ပုတ်ချတယ်။ ပဲစဉ်းငုံ၊ နွားစာပြောင်း၊ နေကြာခင်းတွေကို ဒိုဇာတွေနဲ့ ထိုးဖျက်တယ်။ လူစာမရှိ နွားစာမရှိ ဖြစ်ကုန်ပြီ” ဟု ဆည်းတည်းရွာသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဒေသခံတောင်သူများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားရာသို့ ရောက်ရှိလာသည့် ရွှေညဝါဆရာတော်မှ “ဒီလို အကြမ်းဖက် ဖြေရှင်းလိုက်တာဟာ ၂၀၁၅ ကိုသွားနေတဲ့ လမ်းခရီးမှာ ပြည်သူတွေရော ရဟန်းရှင်လူတွေရောကို ခြိမ်းခြောက်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ ခြိမ်းခြောက်ရုံတင် မကဘဲ ၂၀၁၅ အခင်းအကျင်းမှာ ဒီလို သတ်ပြမယ် ဖမ်းပြမယ်၊ ဒဏ်ရာတွေရအောင် လုပ်ပြမယ်ဆိုပြီး ပြည်သူတွေနဲ့ ရဟန်းရှင်လူတွေကို အကြောက်တရားတွေနဲ့ ဆက်ပြီးသွားဖို့၊ လွှမ်းမိုးပြီး အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျချင်တဲ့ စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ချင်လို့ ဒါမျိုး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်တယ်လို့ ထင်တယ်။ အဲဒီလို ပုံစံတွေလည်း တွေ့မြင်နေရတယ်” ဟု မိန့်ကြားသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက မိုးကြိုးပြင် အလယ်ရွာမှ အသက် ၅၆ နှစ်အရွယ် ဒေါ်ခင်ဝင်းအား လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်တွင် မိုးကြိုးပြင်ကျေးရွာမှ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ အလုပ်ဆင်းခြင်း မရှိတော့ကြောင်း သိရပြီး ကုမ္ပဏီဘက်မှလည်း မြန်မာအလုပ်သမားများကို ၀င်ခွင့်မပေးကြောင်း သိရသည်။
“သေဆုံးသူ ဒေါ်ခင်ဝင်းရဲ့ နာရေးကို မနက်ဖြန် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်မှာ ပြုလုပ်သွားမှာပါ။ မုံရွာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ တက်ရောက်ကုသခံနေရတဲ့ လူနာကိုးယောက်မှာ နှစ်ယောက်က ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်ခဲ့ရပြီး အားလုံး ဆေးရုံက ဆင်းလာပါပြီ” ဟု မိုးကြိုးပြင်ကျေးရွာ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
“အမေ့ကို မန္တလေးမှာရှိတဲ့ သမီးတွေနဲ့ လာနေဖို့ ကျွန်မတို့ ညီအမက ခေါ်တယ်။ အမေက သူ့ဒေသမှာ သူပျော်တယ်။ အမေပိုင်တဲ့ယာ ခုနစ်ဧကလောက် အသိမ်းခံရတယ်။ မိုးကြိုးပြင်ရွာက သူ့အိမ်လေးမှာ တစ်ယောက်ထဲ နေတယ်။ သူ့မောင်ရယ် တူမတွေရယ်က လာစောင့်ရှောက်တယ်။ အရင်က ပြဿနာဖြစ်တဲ့ နေရာတွေကို မလိုက်ဖူးဘူး။ အခု သေနတ်နဲ့ အပစ်ခံရမယ့် အခေါက်မှ သူ့ယာခင်းလေးဘက် သွားကြည့်ရင်း အပစ်ခံရတာ။ အမေက ခါးနာနေတော့ ဘယ်မှ သိပ်မထွက်ဘူး။ အခုတော့ အမေ သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ သေခဲ့ပြီ။ နေ့လည် ၂ နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး ဖုန်းနဲ့ အကြောင်းကြားတော့ မုံရွာဆေးရုံမှာလိုလို ပြောပြီး ရောက်တော့မှ နေရာတင် သေနတ်နဲ့ အပစ်ခံရတာလို့ သိရတာ” ဟု သေဆုံးသူ၏သမီး မဝင်းခိုင်က ပြောကြားသည်။
တောင်သူ ဒေါ်ခင်ဝင်း သေဆုံးခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ညီမဖြစ်သူ ဒေါ်သန်းနုက “ကျွန်မတို့ မတရား အလုပ်ခံခဲ့ရတာပါ။ ဥပဒေအရ ပြန်ပြီး တရားစွဲချင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့မှာ ဘာမှမလုပ်ရပဲ ခံစားရတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ လာရောက်တာလည်း မရှိသေးပါဘူး။ အစ်မက မိသားစုဝင်ထဲမှာ အကြီးဆုံးပါ။ သူက ခါးနာနေတာကြောင့် ကောင်းကောင်းမသွားနိုင်ပါဘူး။ အိမ်မှာပဲ တစ်ယောက်ထဲ အနေများပါတယ်။ အဲဒီနေ့က သူက ဘေးကနေ ထိုင်နေခဲ့တာ။ မတရား လုပ်ခံလိုက်ရတာပါ” ဟု ပြောကြားသည်။
Land Grabbing by War War Win Company Ltd Vs 3000 Families Migrants Workers
Land Grabbing by War War Win Company Ltd Vs 3000 Families Migrants Workers.